एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा खगेन्द्र क्षेत्री विजयी, :: Press Chautari ::
एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा खगेन्द्र क्षेत्री विजयी,
-न्युर्योक र क्यालिफोर्नियामा तत्काल च्याप्टर गठन गरिने ।
एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा कानुन व्यावसायी खगेन्द्र क्षेत्री अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकाछन् । आईतबार अपरान्ह् सम्पन्न भएको एनआरएन, अमेरिकाको अन्तिम मतगणनामा क्षेत्रीले १ हजार ९ सय अठार मत प्राप्त गरेका थिए । यसैगरी अध्यक्ष पदका अर्का दुई उम्मेद्वार शिव कुमार राई र बिष्णु द्यौरालीले क्रमसः ८ सय आठ र १ सय छत्तिस मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा लोक तिवारी निर्वाचित भएकाछन् भने उपाध्यक्ष पदमा श्री पराजुली र बनिता कतिला निर्वाचित भएका छन् । यता महासचिव पदमा कृष्ण पोख्रेल निर्वाचित भएकाछन् भने कोषाध्यक्षमा बेदराज बस्नेत विजयी भएकाछन् । निर्वाचनमा दिल बहादुर श्रेष्ठ र सञ्जिब श्रेष्ठ क्रमसः सह–सचिव र सह–कोषाध्यक्ष पदमा विजयी भएकाछन् । यसैगरी नवनिर्वाचित अन्य बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरुमा राधा पौडेल, बिष्णुमान प्रधान, सरोज कुमार श्रेष्ठ, लक्ष्मी प्रसाद बजगाँई, बलराम थापा, बैकुण्ठ खनाल र धर्म भट्टराई रहेकाछन् । संस्थाको प्रवक्तमा नारायण गुरुङ्ग निर्वाचित भएकाछन् भने सञ्चार संयोजकमा कृष्ण सञ्जेल निर्वाचित भएकाछन् ।
यसै गरी एनआरएन आईसिसी प्रतिनिधिको निर्वाचनमा डा. बिनोद शाह, राजा घले र नविन शेरचन निर्वाचित भएकाछन् । यत निर्वाचन अघि नै महिला संयोजकमा उमा कार्की र युवा संयोजकमा बर्षा मोक्तान निर्विरोध निर्वाचित भईसकेकाछन् ।
जुन ४ देखि १२ तारिख सम्म सम्पन्न एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा ३ हजार ८ सय उनानब्बे मतदाता मध्ये २ हजार ८ सय अन्ठउन्न जनाले सिम्प्ली भोटिङ्ग मार्पmत अनलाईन मतदान गरेका थिए । यसैगरी १ सय सत्र जनाले हुलाक मार्पmत मतदान गरेकोमा १३ वटा मत रद्ध भएको थियो ।
आईतबार आयोजना भएको अन्तिम मत परिणामको घोषणा सभापछि अध्यक्ष पदमा भारी मतसहित निर्वाचित अध्यक्ष खगेन्द्र क्षेत्रीले एनआरएन अमेरिकाले न्युयोर्क र क्यालीफोर्नियामा तत्काल च्याप्टर गठन गर्ने बताए । घोषणा सभामा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीले सबैको सामुहिक एकता र प्रयासले नै आगामी दिनहरुमा एनआरएन अमेरिकाले अग्रगति लिने बताए । यससँगै उनले नागरिकता निरन्तरता र दोहोरो कर प्रणालीको सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा एनआरएन अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद, उत्तर अमेरिकाका क्षेत्रीय संयोजक नवराज गुरुङ्गले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सम्पन्न भएको एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनको खुलेर प्रशंसा गरे ।
कार्यक्रममा एनआरएन अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद, उत्तर अमेरिकाका क्षेत्रीय उप–संयोजक सोनाम लामा, निर्वाचन प्रमुख बिनोद रोका लगायतले बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा कसले कति मत ल्याए ?
खगेन्द्र जिसी १९१८ (विजयी)
शिवकुमार राई ८०८
विष्णुहरि देउराली १३६
लोकनाथ तिवारी १०९१ (विजयी)
सानुबाबु सिलवाल ८४२
घनप्रसाद दवाडी ७६५
श्रीप्रसाद पराजुली १३०६ (विजयी)
बनिता कतिला ११५५ (विजयी)
मुकुन्द ढुंगाना १०२०
सूर्य लम्साल ७९६
शेषराज खतिवडा ३६८
कृष्ण पोखरेल ९२० (विजयी)
तिल श्रेष्ठ ६८५
पुरुषोत्तम बोहरा ५४३
बाबुराम लामा ३८५
प्रेम गुरागाईं २६७
दिलबहादुर श्रेष्ठ १२४० (विजयी)
उपेन्द्र भट्ट ६२२
सतेन्द्र साह ५२९
नारायण क्षेत्री ३०६
वेदराज बस्नेत ८९१ (विजयी)
मिलनकुमार शाही ८२२
गोकर्ण दहाल ७०८
सुमनराज सापकोटा २७६
सञ्जीवकुमार श्रेष्ठ १६७७ (विजयी)
प्रकाश सापकोटा १००१
नारायणबहादुर गुरुङ १०५७ (विजयी)
रमाकान्त खरेल ८९३
रामप्रसाद खरेल ७५३
कृष्ण सञ्जेल केसी १७४४ (विजयी)
विनोदकुमार नेपाल ८०५
राधा पौडेल १७५३ (विजयी)
सरोज श्रेष्ठ १५७६ (विजयी)
विष्णुमान प्रधान १५६६ (विजयी)
बलराम थापा १३३१ (विजयी)
लक्ष्मीप्रसाद बजगाईं १२७८ (विजयी)
धर्म भट्टराई १०७६ (विजयी)
बैकुण्ठ खनाल १०२१ (विजयी)
विमल ज्ञवाली १०१९
वेदनिधि दहाल ९६३
रविनराज वज्राचार्य ८९३
शुक्रराज घिमिरे ८२५
देवीप्रसाद पाण्डे ७५३
युवराज खनाल ६९२
चेत भट्टराई ६८८
डा. विनोद साह १८१३ (विजयी)
राजा घले १५३९ (विजयी)
नविन शेरचन १३६१ (विजयी)
सञ्जीव सापकोटा १२४५
बाला घिमिरे ११२८
सोमवार, २०७१ असार ०२ गते १९:०२ / Monday, Jun 16, 2014 7:02 pm